SUPERBAHİS630 RYAN BABEL'DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! - RESTBET501.COM GİRİŞ
SUPERBAHİS630 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ!
ရိုင်ယန်ဘေဘယ်လ်သည်မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်မှုများကိုခံနေရသည်။ “သင်အနိုင်ရတဲ့အခါအထောက်အပံ့ကလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါသင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့သူကိုတကယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသူတွေပြောတာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ငါသိတဲ့တစ်ခုတည်းကငါပဲဒီကစားသမားအုပ်စုကိုယုံကြည်တယ်” တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ရိုင်ယန်ဘဲလ်စကားလုံး “ကျွန်တော်တို့ဟာအတူတူအနိုင်ရပြီးရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့မိသားစုတစ်ခုပါပဲ။ ကစားသမားတွေကကျွန်တော်တို့ဟာသိပ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှအဲ့လိုမပြောတတ်ဘူး။ နောက်လာမယ့်ဂိမ်းအတွက် ၂ ပတ်လောက်အသင့်ရှိနေဖို့လိုတယ်” ပုံစံဖြင့်ပုဒ်ဖြတ်။
RESTBET501 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! BETPAS423 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! BETBABA100 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! SUPERTOTOBET0120 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! BETBABA138 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! RESTBET501 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ BETBOO868 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ BETPAS423 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ SUPERBAHİS630 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ SUPERBAHİS630 FENERBAHÇE’NİN GİZLİ KAHRAMANI SELÇUK ŞAHİN
7 Comments on SUPERBAHİS630 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ!
SELİM December 4, 2020 at 6:00 pm
MEHMET December 5, 2020 at 4:50 am
restbet canlı izle restbet oranları düşük bu sitenin ya
ŞEYDA December 5, 2020 at 7:50 am
YUSUF KENAN December 6, 2020 at 5:30 pm
ERCAN December 10, 2020 at 8:30 pm
restbet casino kayıt bonusu kaç
ASLI December 13, 2020 at 3:40 am
BARIŞ December 13, 2020 at 8:00 am